The Cave - A Newly Opened Bar for Your Complete Nightout Experience 1282 views
The Cave ဆိုတဲ့ Bar & Restaurant အသစ်လေးတစ်ခု မနေ့က Opening လုပ်သွားပါတယ်။ နေရာက အမှတ်(၁၄)၊ ကမ္ဘောဇလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား မှဖြစ်ပြီး Bar One 4, Ginki Kids တို့နားမှာပါ။ ဆိုင်လေးက The Cave ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် Adamas ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အတွင်းကို ဖြတ်ပြီးဝင်ရတာပါ။ The Cave အတွင်းထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ Bangkok ကိုရောက်သွားသလို bar experience မျိုးကို ရစေပါတယ်။ သံရေတိုင်ကီတွေကို သုတ်ဆေးအဖြူသုတ်ပြီး အမိုက်စား စားပွဲခုံတွေအဖြစ် ပြင်ထားတာပါ။ တိုင်ကီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလည်း ခပ်နီးနီးနေရာချထားတော့ The Cave ကို လာရောက်သူတွေ မစိမ်းကားဘဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးဖလှယ်စေလိုတဲ့သဘောပါလို့ The Cave ရဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ ဒီ bar ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော Thai Pub အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ထူးခြားတာက Live Band ပါ။ ဘန်ကောက်ကနေ ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ပါ။ Live Music လေးရယ်၊ ခပ်မိုက်မိုက်ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးရယ်၊ အခြားလူတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး Social ဖြစ်စေတဲ့ ပတ်ဝင်းကျင်ရယ် နဲ့ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Night out experience လေးက The Cave မှာ ပြီးပြည့်စုံမှာပါ။
Opening Party က ဒီနေ့ (စနေနေ့) လည်း ဆက်ပြီးရှိမှာမို့ ဒီဘန်ကောက်စတိုင် bar လေးကို ကြွရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒီပုံတွေကတော့ မနေ့ Opening Party ကရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။
Yesterday, there was an opening party atanew bar at town called The Cave. It is located at No.(14), Kanbawza Road, Golden Valley, near Bar One4and Ginki Kids. As the name suggests, you have to enter througharestaurant called Adamas in order to get to The Cave... Once inside, it gives youaBangkok bar experience, the decoration is highly influenced by pubs in Bangkok. They use white painted tin water tanks as tables, and the ambience is very chill and friendly. Moreover, those tables are placed close to each other, so that people can mingle and socialize without awkwardness... One of the bar owners said they opened The Cave to really give people in Yangonanightlife experience close to the one in Thailand... They said The Cave is the first and only Thai Pub in Myanmar... Another significant thing about The Cave is their live band, who come perform directly from Bangkok... With its live music in the background, chill and friendly ambience where people can socialize easily, The Cave is definitely going to make your nightlife experience complete...
Their opening party is going to continue today as well, so we welcome all of you who are interested to gain Bangkok style bar... The pictures were taken at yesterday opening party...